Amlodipine (အမ်လိုဒပင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Amlodipine (အမ်လိုဒပင်း)
Amlodipine (အမ်လိုဒပင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Amlodipine (အမ်လိုဒပင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Amlodipine ကို မည်သည့်အကြောင်းအရာများအတွက် အသုံးပြုကြပါသလဲ။
Amlodipine ကို သွေးပေါင်တက်ခြင်းကိုကုသဖို့ တစ်မျိုးတည်းသော်လည်းကောင်း၊ အခြားဆေးတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီးသော်လည်းကောင်း အသုံးပြုကြပါတယ်။ သွေးပေါင်ကျစေခြင်းဟာ လေဖြတ်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ အစရှိတာတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Amlodipine ဟာ calcium channel blockers တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ သွေးကြောနံရံတွေကို ကျယ်စေတာမို့ သွေးပိုမိုလွယ်ကူစွာ စီးဆင်းစေပါတယ်။
Amlodipine ကို ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းအချို့ကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက်လည်း အသုံးပြုပါတယ်။ သူဟာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းကို ကူညီပေးပြီး ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းကို လျော့ကျစေပါတယ်။ Amlodipine ကို ရင်ဘတ်အောင့်တဲ့ အချိန်တွေမှာတော့ ကုသဖို့ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ အခြားဆေးတွေဖြစ်တဲ့ sublingual nitroglycerin ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းကို ကုသဖို့ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
Amlodipine ကို ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်ပါသလဲ။
Amlodipine ကို သောက်ဆေးအဖြစ် အစာနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ အစာမပါပဲသော်လည်းကောင်း ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ဆေးပမာဏဟာ သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ ကုသမှုကို တုန့်ပြန်မှုပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ ဆိုးကျိုးတွေကို လျော့ကျစေဖို့ သင့်ဆရာဝန်က ဒီဆေးကို ပမာဏအနည်းဆုံးကနေ စပေးပြီး တဖြည်းဖြည်း တိုးမြှင့်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချကိကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။
Amlodipine ကို အစွမ်းအထက်ဆုံးဖြစ်စေဖို့ နေ့တိုင်းအချိန်မှန်သောက်သင့်ပါတယ်။ သွေးပေါင်တက်နေတဲ့ လူနာတွေဟာ နေမကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတွေ မခံစားရတတ်တာကြောင့် နေကောင်းနေတယ်ဆိုပြီး ဆေးရပ်ခြင်း မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် Amlodipine ကို ပုံမှန်သောက်သင့်ပါတယ်။ ရင်ဘတ်အောင့်တဲ့ အခါမှ မသောက်သင့်ပါဘူး။ အခြားဆေးတွေ ဖြစ်တဲ့ sublingual nitroglycerin ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ရောဂါလက္ခဏာတွေ မသက်သာ ရင် (သို့) ပိုဆိုးလာရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။ (ဥပမာ – သွေးပေါင်တက်နေတုံး (သို့) ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း မသက်သာရင် (သို့) ပိုဆိုးလာရင်)
Amlodipine ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Amlodipine ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Amlodipine ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Amlodipine ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Amlodipine ကိုမသောက်သုံးခင်မှာ ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။
Amlodipine မသောက်သုံးခင် အောက်ပါအခြေအနေတွေ ရှိရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
• Amlodipine (သို့) အခြားဆေးတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ရင်
• အခြားဆေးတွေ၊ ဗီတာမင်တွေ၊ ဖြည့်စွက်စာတွေ၊ herbal ထုတ်ကုန်တွေ သောက်နေတာ ရှိရင်
• နှလုံးရောဂါ၊ အသည်းရောဂါရှိရင်
Amlodipine က ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လဲ။
အောက်ဖေါ်ပြပါ ပြင်းထန် လက္ခဏာတွေ ရှိရင် ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်း ခေါ်သင့်ပါတယ်။
• မေ့လဲတော့ မလို ခံစားရခြင်း
• လက်၊ ခြေခြင်းဝတ်၊ ခြေထောက်ရောင်ခြင်း
• နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ ရင်တလှပ်လှပ်ဖြစ်ခြင်း
• ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ လက်မောင်း၊ ပုခုံး နာကျင်ခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ နေမကောင်းခြင်း
• ခေါင်းမူးခြင်း၊ အိပ်ငိုက်ခြင်း
• နီရဲခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း၊ ထုံကျင်ခြင်း
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ခံစားရမှုမှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးဝါးတွေက Amlodipine နဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်သလဲ။
Amlodipine ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
ဒီဆေးကို အောက်ဖေါ်ပြပါဆေးတွေနဲ့ တွဲဖက်သောက်သုံးခြင်းဟာ ဘေးထွကဆိုးကျိုးတွေကို ပိုဆိုးစေနိုင်ပေမယ့် တွဲသောက်ခြင်းဟာ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးနှစ်ခုလုံးအတူသောက်ရင် သင့်ဆရာဝန်က ဆေးပမာဏနဲ့ ဆေးသောက်ပုံတွေကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။
• Simvastatin (Zocor, Simcor, Vytorin);
• အခြား နှလုံးရောဂါ၊ သွေးပေါင်ကျဆေးများ
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေက Amlodipine နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
Amlodipine က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက Amlodipine နဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိမလဲ။
Amlodipine ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
• နှလုံးရောဂါ၊ အခြားနှလုံးပြဿနာများ
ယခုဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည် ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ နေရာတွင်အစားထိုးရန် မဟုတ်ပါ။ ဆေးမသောက်သုံးခင်မှာ ဆရာဝန်နှင့်ဖြစ်စေ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့်ဖြစ်စေ အမြဲ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ Amlodipine ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
သွေးတိုးရောဂါ အတွက် လူကြီးသောက်ရန်
Initial dose:5mg သောက်ဆေးတစ်ရက်တစ်ကြိမ်
Maintenance dose:5to 10 mg သောက်ဆေးတစ်ရက်တစ်ကြိမ်
ခန္ဓါကိုယ်သေးသောပိန်သောလူနာများအတွက် 2.5 mg သောက်ဆေးတစ်ရက်တစ်ကြိမ်နဲ့ စတင်ကောင်းစတင်နိုင်သည်။
Angina Pectoris အတွက် လူကြီးသောက်ရန်
Chronic stable (သို့) vasospastic angina လူနာ (သို့) နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရှိပေမယ့် နှလုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်းအထိမဖြစ်သေးသော ejection fraction ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း အောက်လူနာများအတွက်:5to 10 mg သောက်ဆေးတစ်ရက်တစ်ကြိမ်
chronic stable (သို့) vasospastic angina လူနာအများစု လုံလောက်သောအာနိသင်ရရှိရန် 10 mg လိုအပ်သည်။ လေ့လာမှုများအရ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းလူနာအများစုသည် 10 mg ဆေးပမာဏလောက်လိုအပ်သည်။
ကလေးငယ်တွေမှာ Amlodipine ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
သွေးတိုးရောဂါအတွက် အတွက် ကလေးသောက်ရန်
၆ နှစ် မှ ၁၇ နှစ်အထိ: 2.5 mg to5mg သောက်ဆေး တစ်ရက်တစ်ကြိမ်။
ကလေးလူနာများတွင် နေ့စဉ် တစ်ရက်ကို 5mg ထက်ပိုပေးခြင်းကို လေ့လာထားချက်များမရှိပါ။
Amlodipine ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုး အချိုးအစားမျိုးတွေနဲ့ရရှိနိုင်မလဲ။
Amlodipine ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သောက်ဆေးပြား: 2.5 mg,5mg, 10 mg.
• နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Amlodipine ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုင် 25, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုင် 27, 2017
Amlodipine. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-5891/amlodipine-oral/details. Accessed Aug 15,
Amlodipine (Oral Route). http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/amlodipine-oral-route/description/drg-20061784. Accessed Aug 15, 2016.
Amlodipine. https://www.drugs.com/amlodipine.html. Accessed Aug 15, 2016.
Home Blood Pressure Test (အိမ်မှာ သွေးပေါင်ဘယ်လိုချိန်မလဲ)
သွေးတိုးခြင်းက ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသလား ?
သွေးတိုးရောဂါ အမျိုးအစားများ၊ လက္ခဏာများနှင့် ကုသပုံနည်းလမ်းများ